सुनसरीमा गोली चल्यो, एक जना घाइते ! - सुनसरीमा गोली चल्यो, एक जना घाइते !
सुनसरीमा गोली चल्यो, एक जना घाइते !
२०७५, २२ चैत्र, 07:35:58 PM
सुनसरी । सुनसरीमा प्रहरी र स्थानीयबीच भएकाे झडपमा गोली चलेको छ। भन्सार चेकजाँचका क्रममा गोली चलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ।
दैनिकजसाे सामान जाँच गर्ने क्रममा झडप हुँदा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वडा नम्वर ८ मा प्रहरीको गोली लागि स्थानीय घाइते भएका हुन्। नाका जोडिएको क्षेत्रबाट आउने व्यक्तिलाई जाँच गर्ने क्रममा विवाद हुँदा घटनाले उग्र रूप लिएको स्थानीयले बताएका छन्।
त्यहाँ केहीबेर स्थानीय र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको छ। स्थानीयका अनुसार प्रहरीले केही राउण्ड गोली चलाएको छ। गस्ती प्रहरीसँगको झडमा परी सइ चन्द्रकुमार शाक्यको औंलामा गोली लागेको सुनसरीका डीएसपी ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुयाँलले जानकारी दिएका छन् । झडपमा एक राउण्ड गोली चलेको उनले बताए।
सामान जाँचका क्रममा स्थानीले प्रहरीको बन्दुक खोसेको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ।